Ngaba iikhompyuter zabasebenzisi beCAD / GIS ziyafa? -Izixhobo zeGeofumadas
Ngo-Okthobha, 2010 Iiphotography, Geospatial - GIS, Internet kunye neBlogs
Ngeyona nto ilahlekelwe ngayo ukudweba itafile yokudweba eofisini ... Ngaba abadwebi beemifanekiso baza kubuyela kuloo ndawo?
Umcimbi uxoxiwe kwinqanaba ngokubanzi, kwaye basalungile. Ndiqinisekile ukuba siza kubona iiPC zekhompyuter njengeposi eprintiweyo; ukuthunyelwa okhethekileyo kuphela. Umagazini wePC Kule nyanga izixhobo ezinzima ze-techno-smokes ziguqulwa kwisifundo, nangona umgca walo ophezulu ugxile kwiindlela ze-45 zokwenza Twit ngasinye sneeze.
Usizi, makube kukuhlelwa enye ngaphezulu, uCarlos Mendoza. Ukuba bendisazi, ndimthumelela umyalezo nge-toast ngembeko yayo nayiphi na ingoma ka-Lennon, nakweyiphi na ikona ye-plinth ngethuba lam nge-bicentennial.
Kodwa kwilizwe lemizobo akuyi kuba njalo. Ukukholelwa ukuba iPC eqhelekileyo iya kufa ichaphazelekayo ngokwahlula phakathi kokusetyenziswa kolwazi kunye nemveliso. Okanye njengoko umhlobo owileyo weeCanaries angatsho, phakamisa iflegi koobhishophu okanye ube phakathi kwabakhasayo.
I-PC ifa ngenxa yabasebenzisi benkcazelo
Ngoku kuyenzeka ukuba ufikelele kwidatha esuka kwizixhobo ezahlukileyo, kuyinkunkuma nokuba uyenza ungagungqi -kodwa echanekileyo-isikhundla esitudiyo, kude kube kuxhonywa kwihammock nge Wii ngelixa abantwana bephazamiseka kumabonwakude. Nokuba kukonwabisa, ukunceda umntu ogcina umntwana ngemisebenzi yakhe yasekhaya yezeNtlalontle, ukujonga i-imeyile okanye ibhlog blog; omnye umnwe wonele.
Kwaye kwiimeko zethu ze-CAD / GIS, ukusetyenziswa akudingi ngaphezu kwe-Acer Aspire ukuvula, ukuprinta, ukuthumela kwi-cannon (datashow), qhagamshelana okanye olubomvu usebenzisa iMephu yeBentley okanye i-gvSIG. Kwibala, iMappa Mapper 6 inokuhambisa ICartoPad kunye nale, hlela emva koko ubuyele kwikhabhinethi. Njengomabonwakude, akukho mntu uthatha ilayisensi okanye inkqubo ekhethekileyo, kuphela sisixhobo sokubukela, ngokwahluka kokunxibelelana.
Ewe, idatha edlayo ayihlali ndawo GPU, kuba phantse yonke inzululwazi yalo msebenzi ikwidatha (evelisiweyo) kunye nasekusebenzeni kokukhanya nayo. Yiba zezifreyimu zobume, ii-topologies ngaphakathi kwesiseko somhlaba okanye intelekelelo izicwangciso eziqhelekileyo.
Kodwa umsebenzisi osebenza kuhlelo lwevidiyo, ukuzoba i-CAD okanye inkqubo ye-GIS ngokuqinisekileyo ngekhe akwazi ukuvumela isikhundla sabo esiqhelekileyo phambi kweliso, elenziwe lacaba, libanzi kwaye linganabungozi emehlweni. Hayi ngenxa yedatha, kodwa ngenxa yeenkqubo ezilapho likhona ishishini lakho, kwaye le ntuthuzelo ayichaphazeleki.
Kungenzeka ukuba umyili wemifanekiso uziva ekhululekile kunye nepensela esandleni sakhe, endala kwisikrini Wacom. Kodwa andithandabuzi ukuba singaze siphinde sijikeleze i-drafman ngaphezulu kwetafile kwakhona, eyambiza ukuba imkhuphe apho kwaye imqinisekise ukuba alahle umlawuli ofanayo kunye ne-eraser ejikelezayo.
Ndiyakholelwa ukuba ukugcinwa kwendawo kunye nezixhobo zonxibelelwano ziya kutshintsha, njengediski enzima kunye nempuku engasasebenziyo eyi-dinosaur yeminyaka engama-20 ubudala enamaqhosha ayo amabini ngaphambili; Wayengatshintshi ibhola yakhe phakathi kwemilenze yakhe ngokukhanya okuqaqambileyo okuza kuvela kumlomo wesibeleko sakhe. Ezo zinto zokudlala zenza i-3D maneuvers ziya kuba nakho ukuqhubela phambili, kunye nescreen seflethi esiya kuba nakho ukwenza iifotoogrammetry ngexesha lokwenyani kunye nokuza kuthi ga ngoku sibiza iimodeli ze3D, kodwa ezisengumboniso we-2D. Kwaye ngokuthengiselana, icandelo lexesha liya kongeza ukuze sisebenze kwimilinganiselo emi-4, njengakwilizwe lokwenyani.
Kodwa ekubeni uqhuba umgca we-gdi othekelisayo kunye ne-fossil Geographics Nokuba siqhelekile sicocekile kunye noPyton, baya kudinga iqela elinako ukusenza sizithembe ukuba sivelisa umxholo omtsha. Njengomabonwakude, ukusetyenziswa kuya kuba lula, kodwa imveliso iya kuhlala iyinto eqhelekileyo. Iinkqubo, hayi idatha. Ke iofisi yokuzoba ixesha elide iya kuqhubeka nokuba nomphathi ohamba ngesixhobo esikhanyayo, kunye nebhodi yezitshixo yeholographic kunye nokujonga okujinga kwi-retina yakhe; ukujonga iinkqubo kwiintsuku zakho ezixakekileyo kunye nokugcina ipodcast yakho ihlaziyiwe kwabo banamavila.
Kodwa kwi-cubicles, kuya kubakho iifana ezinhlanu kwiindawo ezihamba nge-marsupial esebenzayo kwi-PC ukwenza imigca esuka kwi-scanner laser ngexesha langempela.
Kwaye ukuba silandele uCarlos, kuya kufuneka simlindele ukuba abuyiselwe kwindawo yokukhulelwa. Ukuba ucofa!
Post edlulileyo«Ngaphambilini UMSEBENZI WAMAGAMA
Post Next Jonga kwi-gvSIG 1.10Okulandelayo »
Iimpendulo ezi-2 "Ngaba iiPCs zaBasebenzisi beCAD / GIS ziyafa?"
Ndivumelana ngokupheleleyo nawe. Kuyinyani ukuba iiwebhsayithi zokunxibelelana, imiyalezo ekhawulezileyo, iifoto, njalo njalo ziyafumaneka. Nangona kunjalo, kwimeko yam, anditshintshi "intuthuzelo" kunye "noxolo lwengqondo" olusebenza kunye ne-WorkStation luyivelisa, nangona ngoku sijonge ukuba ne-GIS emhlabeni nge-PC yeThebhulethi kunye nezinto.
Kodwa ekubeni ndifanele ndiyihlele kwaye ndiyisebenzise, ​​i-PDA, ifowuni yeselula okanye i-laptop ayikugqithisi kwam. Yaye le, nangona ubudala (iminyaka eyi-5 enye kunye ne-2 enye), ndihlala ndibeka imisebenzi enzima kakhulu.
Ukukhawula kunye nokuzonwabisa ukukufunda kwakhona.